Xeer-ilaaliyaha Djibouti oo ka hadlay dembiga uu u xidhanyahay Duuliye Fu’aad | Berberanews.com
Home WARARKA Xeer-ilaaliyaha Djibouti oo ka hadlay dembiga uu u xidhanyahay Duuliye Fu’aad
Xeer-ilaaliyaha Djibouti oo ka hadlay dembiga uu u xidhanyahay Duuliye Fu’aad
Xeer-ilaaliyaha guud ee Dalka Djibouti oo markii ugu horaysay ka hadlay xadhiga duuliye Fu’aad Yusuf Cali oo maalmihii u dambeeyey muuqaal uu iska soo duubay kacdoon ka abuuray dalka Djibouti qaybo kamid, faahfaahin ka bixiyey dambiyada lagu haysto sarkaalkaas iyo guud ahaan xaaladdiisa.
Jaamac Saleeban Cali, xeer-ilaaliyaha guud ee waddanka Djibouti, waxa uu sheegay in Fu’aad uu dambi ka galay Shuruuucda kala dambeynta Ciidamada, in uu isku-dayey burburin iyo xatooyin Diyaarad qaranku leeyahay iyo in uu khiyaamo qaran sameeyey, isagoo xidhiidh la sameeyey dal cadow ku ah Djibouti.
Xeer-ilaaliyaha, ayaa hadalkan jeediyey isagoo difaacaya sababta loo xidhay Sarkaalkan, isagu dhankiisa ku garnaqsaday in cadaalad-darro iyo dulmi lagaga sameeyey ciidanka dhexdiisa, taasina ay ku keliftay in uu ficil sameeyo.
Xaalada magaalooyinka dalkaasi ayaa maanta degen, kaddib dibad-baxyo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay dhowr magaalo oo ay caasimadu kamid tahay.
Xeer-ilaaliyaha ayaa sheegay in uu sarkaalkani si waafaqsan nidaamka garsoorka dalka u yaalla u waajihi doono dacwadiisa, loona qabtay qareen u doodda oo la socda xaaladiisa iyo dacwadiisaba.
Dawladda Djibouti, ayaa lagu eeddayaa qalafsanaan sharci, maamul-xumo iyo musuqmaasuq lagu xidhiidhiyo hogaanka dawladda.
Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka, ayaa isha ku haya xaaladaha dalkaasi ka socda, waxaana muuqata sadaal muujinaysa in maamulka Madaxweyne Geele waajahayo culays siyaasaddeed oo kaga imanaya dhinaca shacabka oo sida la aaminsan yahay ay ka soo dhamaanayso wakhtigii ay xukunkiisa la dhacsanaayeen.
Si kasta ha ahaatee, hadalka Xeer-ilaaliyaha guud, waxa uu ninka xudunta u ahaa gadoodka shacab ee maalintii labaad dhacay uu ku eeddeeyey dambiyo haddii ay ku cadaadaan aanay shacabka laftoodu doonyo qaad uga noqon karin.
Halkan ka Daawo Muuqaalka;
Previous articleMadaxweyne Biixi:Xukuumaddu way ka duwan tahay, madax-dhaqameedka lama doorto
Next articleMadaxweynaha Somaliland Oo Habka Maqalka Iyo Muuqaalka Kaga Qaybgalay Qalin-jebinta arday reer Somaliland ah